Indlela yokupheka i-steak
Nabani na oye wazama isidlo esibizwa ngokuba yi-steak kwivenkile yokutyela akunakwenzeka ukulibala ukunambitha kwakhe okumnandi nokuqhelekileyo. Umcuphi ngamnye ozihloniphayo, eneneni, unayo iresiphi yakhe ye-steak, kodwa kukho iziphakamiso eziqhelekileyo malunga nendlela yokupheka i-steak ngokufanelekileyo. Kwaye ulandela, unako ukukholisa abo bathandekayo kunye nawe ngokwesi sivumba esinomnandi nesinandi.
Kukho ama-steaks amaninzi, ngokufanelekileyo, ezininzi zokupheka. Indlela yokulungiselela ikwahluke. Unokucima i-steak epanini yocingo, ungayibhaka evulekileyo okanye uyipheke kwi-grill.
Ngaphambi kokuba uqhubeke nendlela yokulungisa ngokufanelekileyo u-steak, kuyimfuneko ukuqonda ukuba yintoni umthi we-steak omele, apho utsho ngokufanelekileyo, u-steak ulungiselelwe. I-steak ibizwa ngokuba ngumqhezu wenyama. Ngokuqhelekileyo, ngokubhekiselele kumgangatho ophezulu we-steak, inkcazelo ye "marble" isetyenziswe. Oku kuthetha ukuba kwi-steak kukho iimvumba zeoli ezibamba iintambo ze-muscle, ezingakhange zivumele i-steak ukuba ivumelane ngexesha lokupheka. Yaye la manqatha kule nkqubo isasazeka kuyo yonke inyama, ehambisa ukunambitheka komlomo.
Kukho iindlela ezininzi zokunciphisa inyama, kwaye luhlobo lokucoca kunye nobunzima beqhezu eliqingqiweyo elibonisa umgangatho we-steak. Ukuba ungumthandi weericy na ngexesha elifanayo le-steak kunye neoli amaninzi, uze uqhube umbhobho, yiyo kanye into oyifunayo. 'UKumkani wee-Steaks' isondlo. Kukho ama-steaks afana ne-barrel, crochet, steak-mignon, fillet, njl.
Ukuphakamisa umgangatho wemveliso, i-tastier kunye neyona ndlela isilungelelisi isidlo esilungiselelwe kuyo. Imfuyo enqamkileyo mayibe ebomvu. Ukufakeka kwenyama akufanele kube nzima kakhulu, kodwa kungabi lula. Awukwazi ukulibala malunga nobungakanani benyama. Inkomo ingaba yi-quality premium, kunye ne-varietal kunye nokukhetha. Kakade, inyama yenkomo ye-premium iyona nto ibhetele, kwaye ngenxa yoko, ixabiso eliphezulu kakhulu. Emva koko kuza inyama ekhethiweyo. "Marble" apha ngezantsi. Eyona ndlela, ixabiso elincinci kakhulu liyinkozo yeenkomo, inyama inzima kwaye ingcolile.
Ukulungele i-steaks yinqumle, ubukhulu bayo buvela entendeni, kunye nobukhulu-ukuya kuma-centimitha amabini. Inyama ilula ukupheka, ukuba ityhile.
Ungathengi inyama esele idla ngokucoca ngemiphunga okanye i-marinated. Umgangatho wenyama kunye nokutsha kwaso kwiimeko ezinjalo akunakwenzeka ukuzimisela, kwaye abathengisi abangenangqiqo bavame ukuyisebenzisa.
Ukuthenga inyama kwi-intanethi kunokulungiswa ukuba ulandela iziphakamiso ezilula; ukuthembela kuphela kwiindawo eziqinisekisiweyo, ufunde ukuhlaziywa kwabaxumi malunga nomgangatho wenyama enikezelwayo, kwaye ujonge ngejubane lokunikezelwa.
Ayikho iresiphi yendalo yokulungiselela inyama. Nantsi kuyimfuneko ukuqwalasela iimpawu ezinjenge-softness of meat, "ukukhwabanisa" kwayo kunye nokunyamekela. Izindlela ezibandakanya ukupheka inyama emlilweni ovulekileyo kunye nokudibaniswa kwamanzi kubonwa njengona eyaziwayo. Masiqwalasele ngale ndlela ngeenkcukacha.
Ukulungiswa kwama-steaks emlilweni ovulekileyo kubandakanya ukusetyenziswa kwe-grill, i-roaster, i-barbecue okanye i-stew. Kwinyama musa ukongeza nayiphi na ioli yefriji, kungabi namanzi, amanqatha ayo anele.
Ukupheka iziqwenga ezinkulu zeenkomo, kufuneka usebenzise ioli kunye noomanzi. Inkomo kufuneka ikhutshwe kwincinci yamanzi okanye ibiliswe ngaphezu kobushushu obuphakathi, ukuvala isiqhekeza. Ngelo xesha, inyama enzima iya kuba yincinci.
Inkomo inokuphekwa kwakhona, kodwa ngaphambi kokuhamba nge-marinade.
Isaladi kunye nenyama ye-crab
Indlela yokucoca intlanzi ebomvu?
Ukutya komntwana ukusuka kwiinyanga ezi-3
Isobho se ngulube
I-intanethi iyimfuneko yokunqanda ifilimu kaRezo Gigineishvili "Abahlali"
Iintlobo ze-suite, izakhiwo ezincedo
Ukulahleka kwetoni, imibimbi
Ulusu lwezandla zakho aluzange lugqithise iminyaka yakho ...
I-Vitamin isiselo sekusasa
Ukukhulula imini: iingcebiso zesondlo sokutya
Indlela yokukhetha umbonisi womtshato
I-Greek cheese ene-mint kwi-watermelon